डिस होम जोड्दै हुनुहुन्छ ? एकछिन पर्खनुहोस्, यसरीसम्म जनतालाई ठग्छ 'डिसहोम'ले !
गृह पृष्ठ विशेष बैंकिङ ब्लग पावर न्यूज पर्यटन राजनीति जागिर शेयर बजार कर्पोरेट अटो टिप्स आर्काइभ Preeti To Unicode Unicode To Preeti TV Channels
डिसहोम । बैसाख १५ गतेबाट नेपाल सरकारले एनालग प्रविधिलाइ डिजिटल बनाउने घोषणा गरेपछि यसको गलत फाइदा उठाउने प्रयासमा रहेको एक कम्पनी । १५ गतेसम्म डिस होम नजोडे घरमा च्यानल नै आउंदैन भन्ने भ्रामक विज्ञापन बजाएर जानताको आँखामा छारो हालिरहेको एक कम्पनी । नेपाली जनता सोझा छन् र जे भनेपनि पत्याउँछन् भन्ने शैलीमा डिस होमले नेपाली मिडियाहरुमा मोटो रकम लगानी गरेर झुटको खेती गरिरहेको छ । बैसाख १५ देखि केवल टेलिभिजनहरुपनि डिजिटल प्रविधिमा जाने र कतिपय केवल टेलिभिजनहरु हिजोदेखि नै डिजिटल प्रविधिमा गइसकेको तथ्यलाई बंग्याएर उसले जनताको आँखामा छारो हालीरहेको छ ।
यसै क्रममा जान्तालाई सिधा झुट बोल्न सक्ने कम्पनी आफ्ना ग्राहकहरुप्रति उत्तरदायि होला त ? कतै यो बजारलाई मोनोपोली बनाउने चलखेल त होइन ? जनताका अगाडी यत्रो ठुलो झुट बोल्ने कम्पनीले कतै जनतालाई ठगिरहेको त छैन ? यसैबीच हामीले जनतालाई डीस होमले ठगेको एउटा तथ्य फेला पारेका छौं । मार्च २१, २०१६ का दिन माइसंसार डटकममा प्रकाशित रुपेश कार्कीको ब्लगमा उनले आफुलाई डिस होमले कसरी ठग्यो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । हेरौं बाँकी कुरा रुपेश कार्कीकै शब्दमा : 'मेरो घरमा भएको डिस होमको सेट टप बक्सबाट आवाज कहिले आउने कहिले नआउने समस्या भइरहेको थियो। तेस्को लागि भनेर मैले डिसहोमको कस्टमर केयरमा पटक-पटक कम्प्लेन गरेँ। तर पनि उनीहरु ले कहिले टिभीमा समस्या त कहिले रातो पहेँलो तारमा समस्या भनेर टारी नै रहे। मैले सपोर्टको लागि भन्दा महिनौँसम्म पनि कोही नि पठाइदिएनन् । पछि आफैले डिसहोमको सर्भिस सेन्टर पत्ता लगाएर तीनकुने अफिसमा गएँ। त्यहाँ उनी हरुले चेक गर्दा सेट टप बक्समा समस्या देखियो र बनाउनको लागि ५०० रुपैयाँ लाग्छ भनेर भने। थप २ महिनाको रिचार्ज पनि गर्नु पर्छ भनेर ती रिसेप्सनकी बहिनीले भनिन्। मैले रिचार्ज चैँ किन नि ? भनेर प्रश्न तेर्स्याउँदा, कम्पनी को नियम भनेर जवाफ फर्काइन्।
पछि बक्स लिन जाँदा मैले मर्मत खर्च ५०० चैँ छ तर दुई महिनाको रिचार्ज गर्ने पैसा चैँ छैन भनेँ। ती बहिनीले विनम्रपूर्वक बक्स फिर्ता गर्दै बिल चै दिन मिल्दैन भनिन्। म त छक्क परेँ, पैसा तिर्ने म तर मलाई नै बिल दिन मिल्दैन रे। अनि मैले इन्चार्जसँग कुरा गर्छु भन्दा इन्चार्ज चैँ छुट्टीमा भनेर जवाफ दिइन् ।
लौ ठीकै छ, टिभी त हेर्न पाउने भएँ भनेर घरतिर लागेँ। घर गएर रु ३०० (फागुन २८ गते) को रिचार्ज गरी टिभी हेरिरहेको थिएँ। त्यसको ३ दिनमा (चैत २ गते) फेरि पैसा सकेको मेसेज आयो। अनि मैले डिस होम को कस्टमर केयरमा फोन गर्दा त्यहाँकी बहिनीले विनम्रतापूर्वक पहिले पहिले रिचार्ज गर्दा तपाईँलाई अलि बढी नै टिभी हेर्न दिएका थियौँ, त्यही पुरानो हिसाबले गर्दा तीन दिनमा नै यसरी लाइन काटेका हौँ भनेर भनिन्।
हैन ए गाँठे, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेको ! रिचार्ज गरेको पैसा बराबरको चैँ टिभीमा सिग्नल नदिने रे, अनि पहिले-पहिले चैँ बढी समय च्यानल हेर्न दिएको भनेर चैँ कसरी पत्याउने? यो त सरासर ठगी भएन र भनेको। पैसा तिरेको बिल पनि नदिने, अनी पैसा तिरे बराबरको टिभीमा सिग्नल पनि नदिने। हैन एस्तो ठगी गर्ने निकायलाई कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ भने मलाई उजुरी गर्ने ठाउँको ठेगाना भनिदिनु पर्‍यो । मेरो सेट टप बक्स नम्बर N71902778738'
'भारतप्रेमी' डिस होमको रबैया २ : भारतीय च्यानललाई पैसा तिर्दा, नेपाली च्यानलसँग 'बार्गेनिङ' ! डिस होमको कर्तुत नम्बर १ :
हामीलाई फलो गर्नुहोस् : प्रतिकृया दिनुहोस्